Tilmaamaha Lagu Garto Marka Saaxiibkaa Uu Burburinayo Guurkaaga (Iska Ilaali Saaxiibka Noocaan Ah) - Aayaha
Waxaa laga yaabaa in saaxiibkaa uu burburinayo guurkaaga adigoo xittaa aanan ogeyn isla markaana saaxiib wanaagsan u heysta.
Waa kuwaan 7 tilmaamood oo lagu garto in saaxiibkaa uu burburinayo guurkaaga.
Saaxiibkaa wuxuu ka hadlaa xiriiradaadi hore lamaanahaaga oo kula joogo
Saaxiibkaa wuxuu burburinayaa guurkaaga haddii isaga/iyada ay mar waliba ka hadasho xiriiradii aad soo martay marka lamaanahaagu ku ag joogo.
Saaxiib mar kasta ka hadlo arrintaan ma doonayo inaad mustaqbal yeelatid mana doonayo in guurkaagu guuleysto.
Saaxiibtaa waxay shukaansataa lamaanahaaga
Haddii saaxiibtaa ay leedahay dabeecad ah inay wacdo lamaanahaaga adigoo aanan ogeyn, waxay burburineysaa guurkaaga. Qof shukaansata lamaanahaaga ama xittaa isku dayday inay la haasaawdo waa inaadan ugu yeerin saaxiib.
Si xun ayuu u dhaqmaa lamaanahaaga oo joogo
Noocyada saaxiibada aad leedahay ayaa soo bandhiga waxbadan oo kugu saabsan adiga. Sidaa darteed. Haddii qofkaad saaxiibka la tahay uu sixun u dhaqmo mar kasta oo lamaanahaagu joogo, wuxuu burburinayaa guurkaaga isagoo abuuraya aragti xun oo adiga kugu saabsan lamaanahaaga hortiisa.
Ma xushmeeyo lamaanahaaga
Saaxiib kula raba guur wanaagsan wuu xushmeynayaa lamaanahaaga mana kula dhaqmayo xushmad darro.
Adiga ayaa saaxiibkaa u ogolaaday inuu burburiyo guurkaaga markaad u ogolaato inuu xushmad-dareeyo lamaanahaaga.
Wuxuu kugu dhiirigaliyaa inaad qiyaanto
Saaxiibka wanaagsan marnaba kuguma dhiirigeliyo qiyaano sabab kasta ha keentee. Ka fogoow saaxiibada kugu dhiiri geliya inaad qiyaanto lamaanahaaga ama aad sameyso arrin qiyaano ah.
Saaxiibada noocaas ah waxay burburinayaan guurkaaga, mana doonayaan inaad mustaqbal iyo qoys yeelato.
Wuxuu u maleeyaa inuusan kugu fiicneyn
Markaad heysato qofaad runtii jeceshahay oo saaxiibadaana ay u heystaan inuusan kugu fiicneyn sababo nacasnimo ah aawgeed, saaxiibkaas wuxuu isku dayayaa inuu burburiyo guurkaaga.
Marka saaxiibkaa uu had iyo jeer cabasho ka keeno inta uu la egyahay waqtiga aad la joogtid lamaanahaaga isla markaana uu kugu kalifo inaad kala doorato lamaanahaaga iyo isaga/iyada, saaxiibka noocaas ah wuxuu burburinayaa guurkaaga.
Saaxiibka dhabta ahi marna kuguma sameeyo inaad kala doorato xiriirka aad laleedahay lamaanahaaga iyo xiriirka aad laleedahay isaga/iyada.
Sidee Ku Heli Kartaa Xaas Wanaagsan?
Aqriso Calaamadaha Lagu Garto Ninka Doonaya Kaliya Inuu Kugu Dan Gaaro
Daawo: Niiko Waalli ah Noocii ugu dambeeyay [adaa yaabi doona]